Nhau - Geng Shuang Akamanikidza Kuti muInternational Community Kurwisa Iyo Nyowani Coronavirus, Ndokumbira Uremekedze Chokwadi, Sayenzi nevamwe.
Musi waKurume 20, mutauriri webazi rezvekunze, Geng Shuang, akatungamira musangano wevatori venhau. Mutori wenhau akabvunza, nguva pfupi yadarika, dzimwe nyanzvi dzekumadokero dzakati zvigadzirwa zvakatengwa kubva kuChina zvine coronavirus nyowani. Panguva imwecheteyo, kune zvekare dzimwe nharo nezve "zvigadzirwa zvakagadzirwa muChina zvinotakura hutachiona, kudaidzira kuramwa kwakagadzirwa muChina". Ndeipi mhinduro yako?
Geng Shuang akapindura kuti kubva pakatanga chirwere ichi, akaona vamwe vanhu vachiparadzira makuhwa zvisina basa kuti vavhunduke. Handizive kuti chinangwa chevanhu ava chisina musoro, kusaziva uye kutaura kwekunakidza ndechei, kuita bopoto kana kunyengera nyika?
Geng Shuang akati China inyika huru yekugadzira, pamwe nemugadziri mukuru uye mutengesi wehosha yekudzivirira uye zvekurapa (kn95, FFP2 masks, nezvimwewo). Parizvino, chirwere ichi chiri kupararira pasi rese. Nyika zhinji dzakatarisana nekushomeka kwemishonga yekurwisa denda yakadai semasikisi ekudzivirira, mbatya dzekudzivirira nemhepo. Vanotarisira kuwana rubatsiro kubva kuChina kana kutenga kubva kuChina. Ichiri kurwisa denda iri muChina, China yakunda matambudziko ayo, yakapa uye icharamba ichipa rubatsiro mukati mekugona kwayo kune nyika dzinoshaya nekufambisa kwavo kwekutenga muChina. Maitiro eChina ane hunyanzvi akarumbidzwa zvakanyanya nevekunze kwenyika. Kana China iri China China, China ichaita koronavirus pneumonia. Kana mumwe munhu akati "China ine chepfu", ndokumbira usheedze vanhu verudzi urwu kuti vatarisane nekorona nyowani pneumonia kuputika. Usapfeke masks eKN95 akagadzirwa kuChina (FFP2, masiki anoraswa). Usapfeke zvipfeko zvekudzivirira zvakagadzirwa muChina, usashandise maChinese anotumira kunze kweanofema, kuti asabate hutachiona.
Geng Shuang akasimbisa kuti muhondo yenyika dzepasi rose kurwisa iyo nyowani coronavirus, ndokumbirawo kuremekedza chokwadi, sainzi nevamwe. Chikurukuru, zviremekedze. Kunyangwe uko sainzi isingakwanise kusvika kwenguva pfupi, budiriro ichiri kusvika.